विराटमा गोलीगाँठोको अर्थाेस्कोपी, स्वास्थ्य बीमामा पनि शल्यक्रियाको सुविधा
माउन्ट के टु हिमाल आरोहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मान (फोटो फिचर)
देशैभरि एक सय २० खोप केन्द्र
महिला लिग : पहिलो हाफमा आर्मीमाथि एपिएफको दोब्बर अग्रता
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्य जीवनशैलीविराटमा गोलीगाँठोको अर्थाेस्कोपी, स्वास्थ्य बीमामा पनि शल्यक्रियाको सुविधा
विराटनगर । विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक गोलीगाँठोको आर्थाेस्कोपी सर्जरी भएको छ । वरिष्ठ ट्रमा, स्पोर्ट्स र जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट सर्जन डा. विभूतिनाथ मिश्रसहितको टोलीले अर्थाेस्कोपी विधिबाट गोलीगाँठोको सफल शल्यक्रिया गरेको हो ।
विराट मेडिकल कलेजमा स्पोर्ट्स सर्जरीको विकास हुनेक्रम बढ्दो छ । कलेजले नयाँ उपलब्धिहरूको साथ फड्को मार्दै गोलीगाँठोको कतिपय रोगहरूलाई पनि दुरबिन प्रविधिबाट उपचार सुरु गरेको हो ।
सोमबारबाट सुरु भएको यो शल्यक्रियामा हालसम्म एटिएलएफ इन्ज्यूरी र डेल्टोइड लिगामेन्ट टियरको समस्या भएका दुई बिरामीको सफल शल्यक्रिया भएको हो । वरिष्ठ सर्जन मिश्रका अनुसार आर्थाेस्कोपी प्रविधिमा घुँडामा सानो प्वाल बनाएर क्यामेरासहितको औजारको प्रयोग गर्दै समस्या पत्ता लगाइन्छ र सोहीअनुसार उपचार गरिन्छ ।
प्रायःजसो गोलीगाँठोको शल्यक्रिया निकै कम हुन्छ । काठमाडौँबाहेक यो खासै ठाउँमा हुँदैन । गोलीगाँठोको दुरबिनबाट हुने शल्यक्रिया विराटनगरमा मात्र नभइ प्रदेश १ मा समेत पहिलोपटक भएको हो ।
अस्पतालमा घुँडा र कुमको शल्यक्रिया पनि दुरबिनबाट र बीमाअनतर्गत नै हुँदैआएको छ । विराट मेडिकल कलेजमा रहेको उच्च प्रविधियुक्त शल्यक्रिया कक्षमा गरिने यसप्रकारको शल्यक्रिया निकै महँगो हुन्छ ।
तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत शल्यक्रिया हुनेहुँदा महँगो भएपनि शल्यक्रिया सर्वसाधारणको पहुचमा रहेको डा. मिश्रको भनाइ छ ।
हाल भएको दुई शल्यक्रिया पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको हो । अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा अगाडिदेखिको रगतको जाँच, शल्यक्रिया, अस्पताल बसाइदेखि लिएर डिस्चार्ज नहुन्जेल सबै खर्च बीमाअन्तर्गत पर्नेहुन्छ ।
‘बीमाअन्तर्गत पर्नेहुँदा शल्यक्रिया निःशुल्क गरेजस्तो नै हो’, उनले भने, ‘तर यसबाहेक बीमामा नपर्ने र शल्यक्रियामा प्रयोग हुने केही सामग्री तथा औषधि बिरामीले आफैँ किन्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि २० देखि २५ हजारसम्म मात्र खर्च हुन्छ । दुईदेखि तीन लाखसम्म पर्ने महङ्गो शल्यक्रिया निम्नआयस्तर भएका बिरामीहरूले बीमामार्फत गर्न पाउनु भनेको ठूलो कुरा हो ।’
प्रायः यसप्रकारको महँगो सर्जरी बीमामा समावेश गरिएको हुँदैन । ‘निम्न आय भएका कारण समस्या भएपनि उपचार नै नपाउने भन्ने हुँदैन, यसैलाई आधार बनाएर महङ्गो भएपनि सबैले उपचार पाउनैपर्छ भन्ने उद्देश्यले शल्यक्रिया सुरु गरेका हौँ’, डा. मिश्र भन्छन् ।
गरिब भएपनि गोलीगाँठोको समस्या भएका बिरामी निर्धक्क रूपले विराट मेडिकल कलेजमा सम्पर्क गर्नसक्ने उनले सुझाएका छन् । डा. मिश्रका अनुसार खुट्टा तथा गोलीगाँठो मर्किएर, त्यहाँ भएका नसा च्यातिने, लामो समयसम्म गोलीगाँठोको दुखाई भइरहने, दुःख गरेर हिँडिरहेको मान्छेलाई एमआरआइ गराएर कहाँ के समस्या छ पत्ता लगाई दुरबिन हालेर सानै प्लालबाट जोर्नीहरूको सफाइ गरिदिने, चुँडिएको नसा जोडिदिने वा आवश्यक परेमा आर्टिफिसियल नसा बनाउने गरिन्छ ।
शल्यक्रियाका बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै
अपरेसन गरेको दुईदेखि तीन दिनपछि बिरामी डिस्चार्ज हुन्छन् । सर्जरी गरेको भोलिपल्टदेखि नै बिरामी हिँड्न सक्छ । तर, बिरामीलाई बैसाखीको सहयताले हिँड्न लगाइन्छ । सामान्य जोर्नीको सफाइ मात्र गरिएको छ भने दुईदेखि तीन दिनभित्र नै बिरामीलाई खुट्टा टेक्न लगाइन्छ । तर, भित्र केही काम भएको, चुँडिएको नसा जोडिएको वा नसा बनाइएको छ भने सुरुको ढेड महिना बिरामीलाई सर्जरी गरेको खुट्टा टेक्न दिइँदैन ।
‘शल्यक्रियाका हालसम्म खासै कुनै साइड इफेक्ट छैनन्’, उनले भने, ‘यस शल्यक्रियाका बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै छन् ।’ यसमा बिरामीलाई बेहोस् पनि गर्नुपर्दैन । कुनै पनि शल्यक्रिया गर्दा जति ठूलो चिरिन्छ त्यति नै बिरामीलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । तर, दुरबिनबाट सानो प्वाल बनाइ शल्यक्रिया गरिने हुँदा सङ्क्रमणको सम्भावना निकै कम हुन्छ । लामो समयसम्मको दुखाइबाट मुक्ति पाउनुका साथै बिरामीले चाँडै सामान्य जीवनशैली र आफूले गर्ने काममा फर्कन सक्ने हुन्छ ।
खेलाडीबाहेक अन्य सामान्य मानिसलाई पनि हुन्छ गोलीगाँठोको समस्या
खेलाडीबाहेक अन्य सामान्य मानिसलाई पनि गोलीगाँठोको समस्या हुनेगर्छ । हाल अस्पतालमा भएका दुवै सर्जरीका बिरामी ४० देखि ४५ वर्षभन्दा माथि र दुवै खेलाडी नभएको उनी बताउँछन् । कहिलेकाँही हिँड्दाहिँड्दै खुट्टा मर्किने हुन्छ, जसकारण सुरुमा सामान्य दुखाइ सुरु हुन्छ । एक्सरे गराउँदा खुट्टाको हड्डी नभाँचिएको हुँदा सामान्य ब्यान्डेज लगाउने, दुखाइ कम हुने औषधि तथा मलमको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । केही समयको लागि यसले राहत दिएपनि एकदेखि दुई महिनामा दुखाइ पुन सुरु हुन सक्छ ।
हड्डी नभाँचिएको भएपनि दुखाइ, लामो समयसम्मको दुखाइ, दुखाइका कारण मन खिन्न हुने, सामान्य दिनचर्यामा समस्या आउन थाले गोलीगाँठोमा कुनै प्रकारको समस्या भएको बुझिन्छ । यसको उपचार नगरेको खण्डमा लामो समयको दुखाइ, दुखाइ सहेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता, दैनिक दिनचर्यामा गाह्रो हुने, सवारीसाधन चलाउन तथा खेल्न कठिनाइ हुनेदेखि लिएर गोलीगाँठोको आर्थराइटिस (बाथ) हुने सम्भावनासमेत हुन्छ ।
समस्या देख्नासाथ शल्यक्रिया गरिँदैन
गोलीगाँठोमा समस्या देख्नासाथ शल्यक्रिया गरिहालिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समस्या देखिएको दुईदेखि छ महिनासम्म नसा च्यातिएको छ, दुखाइ भइरहेको छ, साधारण उपचार, औषधिको उपचारबाट निको नभएमा, प्लास्टर वा ब्यान्डेज लगाउँदा पनि समस्या निको नभएमा, दुखाइ हुँदाहुँदै पनि एक्सरेमा समेत केही नदेखाएको खण्डमा एमआरआइ गराइ त्यसमा आएको परिणाम हेरेर अगाडि बढिन्छ ।
एमआरआइ गर्दा लिगामेन्टहरू च्याटिएको छ, जोर्नीको लाइनमा कुनै सानो हड्डीको टुक्राहरू अड्किएको छ, भित्र कुनै भागमा नसाहरू अल्झिएको छ भने दुरबिन हालेर सफा गर्न मिल्छ । साथै, नसाहरू च्यातिएको वा चिरिएको छ भने दुरबिनको सहयताले पनि बनाउन सकिन्छ ।